Indawo Yokuphumula Yokubuka Intaba Yothando - I-Airbnb
Indawo Yokuphumula Yokubuka Intaba Yothando
Cochrane, Alberta, i-Canada
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Eve
Ngo-169 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Eve Ungumbungazi ovelele
Phumula futhi uphumule ekamelweni lakho langasese elingaphansi kwekamelo.
Indawo yakho yokuhlala ekahle ngenkathi uthola i-Banff, i-Canmore, i-Calgary, i-Kananaskis, ne-Bragg Creek!
Le ndawo yesimanje, esanda kwakhiwa, evulekile emadlelweni aluhlaza avulekile lapho unokubukeka okungavinjelwe kwezintaba zaseRocky & ukushona kwelanga okukhanyayo.
Jabulela igumbi lokugezela langasese w/izindawo zaphansi ezifudunyeziwe kanye ne-shower yemvula efudumele, ikhishi elinakho konke, umbhede we-queen ontofontofo nombhede wesofa, i-5G Wifi, i-TV, & ukupaka mahhala emgwaqweni!
Ngena kuleli kamelo langasese, elihamba ngezinyawo endaweni yokungena ehlukile, engenakhiye ngemuva kwendlu. Amafasitela amakhulu abheke entshonalanga avumela ukukhanya kwemvelo okuningi. Izinyoni zakuqala zithola ukujabulela ukuphuma kwelanga ekukhanyeni okubomvana ezintabeni kaningi nezikhathi ezinenkungu emangalisayo ehamba emagqumeni nasemasimini.
Le ndawo egqamile nehlanzekile iqukethe umbhede omkhulu nombhede owusofa (twin), onezibani ezincane ukuze uphumule kahle.
Ikhishi elincane linezitsha, izingilazi, izinto zesiliva, amabhodwe namapani ukulungiselela ukudla kwakho.
Ngena ku-shower enkulu kakhulu futhi ujabulele i-shower enethezekile kanye nezindawo zaphansi ezifudumele ezenza ukuhlala kwakho kube nokuphumula ngangokunokwenzeka.
Jabulela ubusuku obungenazinkanyezi ngenkathi uhlezi eduze komlilo. Ngenhlanhla encane, uzozwa umsindo wama-coyota akhalayo emasimini aseduze, lapho ngokuvamile ungabona khona izilwane zasendle.
I-wifi esheshayo – 169 Mbps
I-HDTV engu-43" ene- I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, I-Netflix, I-Roku
I-Romantic Mountain View Retreat itholakala e-Heritage Hills e-Cochrane, ngemoto emfushane nje yemizuzu engu-7 ukusuka edolobheni elinomlando. Omakhelwane bethu banikeza imizila yokuhamba ngezinyawo neyamabhayisikili enokubukeka okuhle kwezintaba, amasimu, amagquma, kanye nokubheka idolobha. Sivame ukuhlangana nemazi phakathi nokuhamba kwethu, isikhova esihlala enqolobaneni eseduze, futhi ngezinye izikhathi sibona ama-coyote ebangeni.
I-Cochrane ingelinye lamadolobha amakhulu kunawo wonke e-Alberta, amakhilomitha angu-18 entshonalanga yedolobha lase-Calgary eduze ne-Highway 1A.
Itholakala ngaphansi kwe-Big Hill e-Bow River Valley endaweni ephakeme ngamamitha angu-1,891). Inedumela lesiko layo laseNtshonalanga, elingazizwa kalula lapho umuntu ezulazula e-Main Street.
I-Downtown engokomlando, nezitolo zayo eziconsisa amathe zasentshonalanga namagalari, iyindawo ethandwayo ye-ice cream yayo eyenziwe endaweni, ikhofi yasendaweni, indawo eyenza utshwala kanye nezindawo zokudlela.
Izindawo Ezithandwayo Zokuya Nohambo Losuku:
Cochrane RancheHouse 7 imiz Cochrane 's Historic Downtown
Ipaki Elibheke Umfula elingamaminithi angu-8
9 imiz Yamnushka Wolfdog Sanctuary
Imizuzu engu-10 Izixhumanisi ze-GlenEagles Golf Course
14 imiz i-Ghost Lake
14 imiz Glenbow Ranch Regional Park
17 imiz Big Hill Springs Regional Park
30 imiz I-Bragg Creek Regional Park
35 imiz Calgary Downtown
37 imiz Calgary International Airport
40 imiz Kananaskis
45 imiz Falls
Canmore 49 imiz Nakiska Ski Area
51 imiz Kananaskis Nordic Spa
Banff 1h 28 imiz I-Sunshine Village Ski Resort
1h 28 imiz Johnston Canyon
1h 37 imiz Lake Louise
1h 58 imiz Moraine Lake
Ukuze usho okumbalwa nje.
Situsa ukuthi wehlise umzila omuhle we-Hwy 1A ne-Bow Valley Parkway ukuze ubone izilwane zasendle ezizungezile.
Uma udinga noma yini, ngicela ungithumelele umyalezo, futhi ngizojabula ukusiza!
UEve Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Cochrane namaphethelo